नियमित शारीरिक सम्बन्ध राख्ने महिला कसरी चिनिन्छन् ? - ePosttimes
Homeसमाजनियमित शारीरिक सम्बन्ध राख्ने महिला कसरी चिनिन्छन् ?
६ कार्तिक २०७६, बुधबार १२:५८ समाज 0
अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका अनुसार यो सर्वेका लागि महिलाहरुको हिपको सबै भन्दा ठुलो भाग र कमरको सबै भन्दा पातलो भागको नाप लिइयो । यसबाट के पत्ता लाग्यो भने जुन केटिहरुले एक दिनमै पटक पटक यौन सम्बन्ध राखे उनीहरुको हिपको आकार अरु महिलाको भन्दा बढी थियो । यो पनि थाहा भयो कि जुन महिलाको कम्मर पातलो हुन्छ उनिहरु बच्चालाई सजिलै जन्म दिन सक्छन् । जसको हिप ठुलो छ उनिहरुलाइ गर्भवती हुदा खासै समस्या नहुने भन्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
62300cookie-checkनियमित शारीरिक सम्बन्ध राख्ने महिला कसरी चिनिन्छन् ?yes